ဤအကြောင်းအရာများပျောက်ဆုံးနေသောကြောင့်သင်၏အကြောင်းအရာကအငွေ့ပျံသွားသည်။ | Martech Zone
ဒီ Element တွေပျောက်နေလို့သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကစုပ်နေတယ်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 9, 2015 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 9, 2015 Douglas Karr
အစီရင်ခံစာအပြီးတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာသည်အလွန်များပြားသောပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများအတွက်အကြွင်းမဲ့သော့ချက်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြသည်။ ဒါဆိုဘာကြောင့် content marketers သည်အခြား drivel များကဲ့သို့ယေဘုယျ drivel ကိုဆက်လက်ရေးသားနေသနည်း။ မနေ့ညကငါဒေသခံတစ် ဦး မှာတင်ဆက်မှုကိုပြု၏ Sparks ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုငါခေါ်:
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာ Sucks ။ သင်အတိအကျလိုသင်လိုချင်ခဲ့သည်။
တင်ဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတွေရေးသားနိုင်စွမ်းကိုစော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဝေဖန်ဖို့ဖြစ်တယ် သူတို့ရဲ့ပရိသတ်အတွက်အကြောင်းအရာတွေကိုရေးပါ။ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာရေးသားခြင်းအပေါ်နောက်ကျောကျလေ့ရှိပါတယ် ကြှနျုပျတို့ယုံကွညျသညျ အရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါတို့ရဲ့ပရိသတ်စုရဲ့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်နဲ့သာဆက်သွယ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်သည်မတူကွဲပြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တူညီသောလူ ဦး ရေစာရင်းနှင့်အလားအလာရှိသောအလားအလာ (၂) ခုသည်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းစဉ်များစွာရှိလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မယူကြဘူး။
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတိုးမြှင့်ဖို့5Element တွေကို
သိမှတ်မှုတိုးပွားစေ - ရုပ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗွီဒီယိုများကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်ရေးသားနေသည့်စာမူ၏သက်ရောက်မှုနှင့်ပိုမိုသိသာမှုတို့ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
Shareable လုပ်ပါ - အကယ်၍ စာဖတ်သူများ၏တန်ဖိုးကိုမျှဝေပါက၎င်းတို့ကိုမျှဝေပါကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူများသည်သူတို့၏ကွန်ယက်ကိုကြီးထွားလာစေရန်၊ စာဖတ်သူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုမြှင့်တင်ရန်၊ စာဖတ်သူများအား၎င်းတို့အသိုင်းအဝိုင်းသို့အကြောင်းအရာများဝေမျှရန်ကူညီခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့ဂရုစိုက်သောကြောင့်သူတို့မျှဝေရမည့်အကြောင်းအရင်းကိုအသိပေးရန်။
Support ဆုံးဖြတ်ချက်များ - စာဖတ်သူအချို့ကိုယုံကြည်မှု၊ အချက်အလက်များ၊ ထိရောက်မှု၊ ပေါင်းစပ်မှုများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဤအရာအားလုံးပါ ၀ င်သည့်မျှမျှတတရှိသောအကြောင်းအရာသည်စာဖတ်သူများနှင့်ပိုမိုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။
လှုပ်ရှားမှုဆွဲဆောင် - မောင်းနှင်သည့်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည် သှေးဆောငျခွငျး - အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှု၊ သဘောတူညီမှု၊
စိတ်ကြိုက် - လူများရောက်လာပြီးသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်မှထွက်ခွာသည့်အခါလူတို့သည်သူတို့၏အသက်တာကိုမဖွင့်၊ ပိတ်ကြသည်။ စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူခြင်းကိုသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကလွှမ်းမိုးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝယ်ယူမှုသင့်အလုပ်အားဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ ဥပမာကားတစ်စီး ၀ ယ်ခြင်းသည်ရှည်လျားသောခရီးသည်များအတွက်ဓာတ်ငွေ့မိုင်အကွာအဝေးကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယမန်နေ့က e-commerce ကုမ္ပဏီနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်မယုံနိုင်လောက်သောဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများမြင့်မားသည်၊ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖောက်သည်အသစ်များကိုဝယ်ယူရန်အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ကုမ္ပဏီပြောတာကသူတို့ကုမ္ပဏီဘယ်လောက်ထူးခြားတယ်ဆိုတာပဲ။ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်အခြေစိုက် ၁၀၀% ရှိကြသည်။ ၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအများစုသည်အမေရိကန်လုပ် (အချို့သောပစ္စည်းများကိုဤနေရာတွင်မဝယ်ယူနိုင်) ပါ။ သူတို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတိုင်းအတွက်သူတို့၏ဖုန်းများကိုဖြေဆိုခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့သိုလှောင်ရုံ ၁၀၀% နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုတည်ဆောက်တယ်။
ဒီဟာကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်မိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဂုဏ်ယူခဲ့သမျှအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာရှာဖို့ဆိုတာခက်ခဲပြီးနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး! သူတို့အကြောင်းအရာများကိုအောက်ပါတို့ဖြင့်ပြောင်းလဲလျှင်ကော။
ထည့်ပါ ပုံရိပ် site ည့်သည်ကိုသူတို့ဆိုက်ရောက်အောင်ချက်ချင်းရောက်အောင်လုပ်မယ့်စက်ရုံအကြောင်း။
မျှဝေပါ သတင်း စွမ်းအင်လွတ်လပ်ရေးရရှိပေါ်မှာ။ လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားသည်စာဖတ်သူများစွာဝေမျှရမည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
facts ည့်သည်များအားအထောက်အကူပြုရန်စက်မှုလုပ်ငန်းအချက်အလက်များ၊ infographics၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ထောက်ခံစာများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ.
ဖောက်သည်တွင်ကန ဦး အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်လျှော့စျေးကမ်းလှမ်းမှုအချို့ရှိသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ထိုသူအားဆွဲဆောင်နိုင်သည် နည်းပါးသော.
ဤရွေ့ကားရှေးရှေးအသည်းအသန်ခဲ့ကြသည်! ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ထူးခြားသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချို့ကိုရေးသားထားသောဗီဒီယိုများမထည့်ပါနှင့်။ ဆက်သွယ်ခြင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပရိသတ်နှင့်အတူပြောင်းလဲမှုများမောင်းနှင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တဖန်၊ သင်၏ယုံကြည်မှုသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်ပြောင်းလဲမှုများကိုသာအဓိကထားသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအကြောင်းအရာများ၏အရည်အသွေးကိုဖောက်သည်များက ပို၍ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုအားပေးအားမြှောက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးရင်းဒါကိုသတိရသင့်တယ်။